Handan Yongnian Zhanyu Fastener Manufacturing Co., Ltd. dia andiana famolavolana fanamafisana ny famolavolana, fampandrosoana tsy miankina ny bobongolo, famokarana, varotra, serivisy ao amin'ny iray amin'ireo orinasa mpamokatra.
Handan Yongnian Zhanyu Fastener Manufacturing Co., Ltd. dia andiana famolavolana fanamafisana ny famolavolana, fampandrosoana tsy miankina ny bobongolo, famokarana, varotra, serivisy ao amin'ny iray amin'ireo orinasa mpamokatra. Ny orinasa dia manana ekipan'ny fandidiana azy manokana, afaka miankina tsy miankina amin'ny karazany lehibe sy kely ...
Tamin'ny 5 Janoary 2021, ny Grand Theatre ao amin'ny distrikan'i Yongnian dia nanatontosa ny fihaonambe ho an'ny asa ekonomika ao amin'ny distrikan'i Yongnian 2020 sy ny fihaonambe fiderana ho an'ireo mpandraharaha tsy miankina.
Tamin'ny 5 Janoary 2021, ny Grand Theatre ao amin'ny distrikan'i Yongnian dia nanatontosa ny fihaonambe ho an'ny asa ekonomika ao amin'ny distrikan'i Yongnian 2020 sy ny fihaonambe fiderana ho an'ireo mpandraharaha tsy miankina. Cui Yafeng, filohan'ny orinasa Zhanyu, dia nahazo ny anaram-boninahitra mpandraharaha tsara indrindra tao Yongn ...
Amin'ny 10 Desambra 2020, mankalaza fatratra ny famindran-toerana ny ivon-toeram-piasan'ny orinasa Zhanyu izahay ary ny famitana sy fampiasana ny trano fitahirizana 7000 metatra toradroa.
Amin'ny 10 Desambra 2020, mankalaza fatratra ny famindran-toerana ny ivon-toeram-piasan'ny orinasa Zhanyu izahay ary ny famitana sy fampiasana ny trano fitahirizana 7000 metatra toradroa. Nandritra ny taona maro, ny orinasa Zhanyu dia nifikitra tamin'ny iraka nahatratrarana ny mpanjifa sy ny mpiasa, ary ny ...